जुन जिईदै छ, त्यो जीवन नै हैन
सोच र व्यवहारिक कार्यन्वयनको तादात्मयताको मिश्रण नहुदाँ जीवन धर्मराउने रहेछ । एकाग्रताको संयमतामा एकरुपता नआउनुमा धर्मराउनुको कारण बन्ने रहेछ । यहि बीचमा अल्झेको जीवनमा सरस हैन, नैराश्यताले मानसपटलमा डेरा जमाउने गर्दछ । यसैको परिणाम सोचको परिणाममा बिर्को लाग्ने रहेछ । अक्सर आम व्यक्तिको जीवन यहि पेरिफेरिमा गुज्रिएको हुदाेँ रहेछ । जीवन आफैमा सृष्टिको निरन्तरता रहेछ, तर यहि निरन्तरता भित्रको वहुआयमिक पक्ष भित्र जीवनको महत्वपुर्ण जव घुल्दछ, अनि त्यहि रस्वादानमा रम्ने, चुम्दै र हेलिदै अनुकुलताको प्रयासमा आम जीवन घुमिरहेको छ । लाग्दछ, यहि नै जीवन हो ।
उमेरको विभिन्न कालखण्डमा संचारित हुने सोचहरु अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित रहेको पाईन्छ । आम मानवीय प्रवृत्ति यहि हो । यहि प्रवृत्तिलाई अंगिकार गर्नेहरुले जीवन केबल सृष्टिको निरन्तरता मात्र बुझदछ, यो भन्दा फरक सोचको कल्पना गर्नु भनेको समाज बाट तिरस्कृत हुनु हो । जो तिरस्कृत र अपहेलितका वावजुद पनि गन्तव्य सम्म पुग्ने हिम्मत राख्दछ, कालान्तरमा उसको पहिचान अलग हुन्छ । उमेर अनुसार सोचको विविधता स्वभाविक भएता पनि कालान्तरमा चेतनाको बिर्को भने डुव्न लागेको घाम झै हुने गर्दछ । सोचको पनि विविधता रहेको हुन्छ, समान सोचले नविनता हासिल गर्न सक्दैन भने फरक सोच गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन र गन्तव्यविहिन यात्रु वनेर हराउछ । यहि पृष्ठभुमिमा अगाडी बढेको सोच विस्तारै कमजोर, अशक्त र व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुगेको छ । यहि नै जीवन रहेछ भन्ने परिभाषाको विकास भएको छ ।
जीवनको सवैभन्दा खराव तत्व के हो भनेर घोत्लिने हो भने महत्वकांक्षा नै प्राथमिकतामा पर्न सक्दछ । यहि चरम महत्वकांक्षा वोकेको सोच जब शरिरको नशा नशामा भिज्न थाल्दछ, तब उ स्वार्थ प्रेरित बन्न पुग्दछ । आवश्यकताको चरमबिन्दुमा पुगेपछि जीवनको परिभाषा बदलिन थाल्दछ । मानव हुनुको औचित्वता खोज्ने हैन, भौतिकवादलाई प्रधान दिने सोचले जरा गाडेको हुन्छ । सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्ने अभिलाषा खोज्ने सोचहरु कदापी जीवनको महत्व बुझने हिम्मत राख्दैन । युवाअवस्थामा आएको त्यो सोच, महत्वकांक्षा सधै अजम्वरी र अपरिवर्तनकारी हुने सोचमा हुर्किएको त्यो मानसिकतामा तव पुर्णविराम लाग्दछ, जब जुगाँको रेखीहरु फुल्न थाल्दछ, गलामा विस्तारै मुजा पर्न थाल्दछ ।
अहंमता र घमण्ड सधै एकैनाश सदावहार वन्न सक्दैन । यहि एकमात्र सत्य वुझन नसक्नेका भीडहरुमा सधै आफनो अस्तित्व खोज्न प्रयत्न गर्नेहरुले समाज बन्धक बनाईरहेका हुन्छन् । जुन पौराणिक कालदेखि चलिरहेको छ र भविश्य सम्म पनि यसले निरन्तरता पाईरहनेछ । जविनको शाव्दिकता खोज्ने प्रयास जब कमजोर हुन्छ, त्यसपछि भाग्य र कर्मलाई दोष दिईन्छ । यहि नै एकमात्र मुल मन्त्र वनेको छ जीवनको । ईच्छा, आकांक्षा र महत्कांक्षामा जव कन्टोल गर्न सकिदैन, त्यसको परिणाम भनेको निरन्तरतामा भर पर्नु मात्र हो । रोकेर रोक्न नसक्ने समयको गतिलाई चिन्न नसक्नु नै जीवनको सवैभन्दा ठुलो भुल रहेछ ।
जीवनको उर्वरउमेर पार गरेर उत्तरार्दमा पुगेका अग्रजहरु सोच्दा हुन् मैले जीवनमा कहाँ भुल गरे ? जीवनका उत्तरार्दमा आफन्त बाट पाएको तिरस्कार, केहि चलमलाउन नसक्ने हातखुट्टा र नजिकका पनि ठम्याउन नसक्ने नयनहरु, सुन्न नसक्ने कानहरुमा ठोकिएको त्यो बर्वर निर्मम आफन्तका स्वरहरु त्यो श्रवणमाध्याममा गुन्जदाँ साँच्चै लाग्ला कि नलाग्ला, मैले जीवनमा कहाँ भुल गरे ? त्यहि गल्तिका पहाडवाट आफन्तलाई दिएको सल्लाह कति सार्थक बन्ला ? जीवन सहज छैन, सहज बनाउनुपर्दछ । यहि मात्र सोच हामीहरुको मार्गदर्शन सिद्धान्त बनेको छ ।
लाग्दछ, जीवन सहज बनाउनु नै सार्थक जीवन हो, यसका लागी गरिने कर्म नै एकमात्र सत्य हो । यहि सोचका दरिद्धतामा अडिएको जीवन जब उत्तराद्र्धमा पुग्दछ, तव उसलाई लाग्ला कि नलाग्ला, जीवन जुन व्यतित गरियो, त्यो हैन रहेछ । जीवनका दायरा धेरै फराकिलो रहेछ, जुन दायरामा हामी प्रवेश नै गरिएन । जीवनको विविधता भित्र पारिवारिक दायित्व त केवल एउटा अंश मात्र हो, जुन आम व्यक्तिले वुझन सक्दैन । यहि जीवनको विविधता जीवनको अन्तिम पलहरुमा सोचको विकास हुन्छ, त्यहि सोच मानव जातिको जीवनको उर्वर उमेरमा सोच्ने साहस हुन्छ कि हुदैन होला ? सोच्ने साहस भएता पनि त्यसले कार्यन्यन गर्न सक्ला कि नसक्ला ? जीवनको परिभाषा जव परिवार र भौतिक वस्तुमा गएर जोडिन्छ, यसले दिने परिणाम भनेको अन्तत नैराश्यता र गल्तीको आभास नै हो । यो भन्दा बाहिर गएर जीवनको दायरालाई वुझने हरुको जीवन सरल बनेन, तर अमर वन्यो, त्यहि अमरहरुको विचार र सिद्धान्तले नै विश्व समुदाय मानव जातिलाई सरल जीवन व्यतित गर्ने माध्याम बनिदियो ।
जीवनका उत्तरार्धमा सोच्ने प्रश्नहरु गला विस्तारै चाउरिदै गर्दा र कपालले रंग फेर्ने खोज्ने समयमा अत्याधिक विकसित बनिदियो । यहि विकसित सोचलाई व्यवस्थापन गर्ने अभिलाषा सहज छैन, फरक गर्ने हिम्मत र साहस छैन, यहि दुविधामा जीवन फेरि त्यहि जंन्जालमा रुमल्लिने त हैन ? प्रश्नहरु अनुत्तरित वनिरहेका छन् । जीवन आफनो हो कि हैन, जीवन कसका लागी ? प्रश्नका भीडमा आफनै लागी हुन नसकेको जीवन अरुका लागी कसरी हुन सक्दछ ? त्यसो भए यति धेरै अनुत्तरित प्रश्नले किन आत्मामा सधै हलचल मच्चाईरहेका होलान् ?
निरन्तरता भन्दा पृथक सोच्ने सोचले सजिलै आत्मिक सन्तुष्ठि प्राप्त गर्न कदापी सक्दैन । तर सोचको विविधतालाई एकाग्रतामा वदल्न नसक्दा त्यसले पार्ने प्रभावले सिंङ्गो समाजलाई कस्तो असर गर्ला ? जीवनलाई निरन्तरताको हिस्सा बनाउने कि पृथक, यहि सोचले फुलेको कपाल र चाउरिएको गलाले सोधिरहेको छ.......के यहि गतिविधिले जीवन पृथक बन्ला र ?